म धेरै से”क्सी हुँदा तपाईंलाई के स’मस्या ? – Sidha Post 24
गर्चित गायिका ज्योति मगरले फेसबूकमा आइतवार एउटा तस्वीर शेयर गरिन् । जुन तस्बिरमा एकै छिनमा भाईरल भयो । अनि अनेक टिका टिप्पनी पनि भईरहेको छ । बोल्ड तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्नु त उनका लागि सामान्य नै हो । तर, आइतवार तस्वीरसँगै उनले लेखेको ‘क्याप्सन’ले सबैको ध्यान तानेको छ । एक कार्यक्रमका लागि नेपालगञ्ज उड्नुअघि उनले लेखेकी छन् । म से क्सी हुन रोक्न सक्दिनँ । यो मेरो रगतमा छ ।
यदि यसलाई तपाईंले सहजै लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईंको समस्या हो । मलाई बाल मतलब । सांगीतिक कार्यक्रमका लागि मगर आइतवार नै नेपालगञ्ज उडेकी छन् ।उनले आईतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यस्तो रहेको छ । म सेक्सी हुन रोक्न सक्दिन, यो मेरो रगतमा छ । यदि तपाई सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईको समस्या हो म साँच्चिकै ख्याल राख्दिन। चर्चित गायिका ज्योति मगरलाई नचिन्ने सायद थोरै नै होलान ।
यतिबेला कोरोइना भाईरस हुदैन थ्यो भने उनी यतिबेला बिभिन्न स्टेज कार्यक्रममा समय दिन भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । गायिका ज्योति मगर पछिल्लो समय डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’का कारणले चर्चामा छिन् । उक्त शोमा उत्कृष्ट ५ भित्र पुगेर हालै बाहिरिएकी छन् । शोमा विभिन्न शैलीका नृत्य प्रस्तुत गरेको कारण चर्चाको केन्द्रमा रहेकी उनले शोमार्फत् आफुलाई बहुमुखी प्रतिभाकी धनीको रुपमा समेत आफू चिनाउन सफल भएकी छन् ।
बिहे गरेको हप्ता दिन नबित्दै, छोरीलाई काखी च्यापेर किन माइत गइन स्मिता ? (हेर्नुहोस् भिडियो)